Ezikiel 32 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Abụ iru uju banyere Fero na Ijipt (1-16)
A ga-elikọta Ijipt na ndị a na-ebighị úgwù (17-32)
32 N’abalị mbụ, n’ọnwa iri na abụọ, n’afọ nke iri na abụọ,* Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 2 “Nwa nke mmadụ, bụọ abụ iru uju banyere Fero eze Ijipt. Sị ya,‘Mba dị iche iche weere gị ka ọdụm siri ike. Ma, e gbuola gị. Ị dịbu ka nnukwu anụ mmiri nọ n’oké osimiri,+ na-eti ụkwụ gị na aka gị n’osimiri gị. I jikwa ụkwụ gị na-agbarụ mmiri ma na-emebi osimiri.’* 3 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: ‘M ga-eme ka ọtụtụ mba jiri ụgbụ m kpuchie gị. Ha ga-ejikwa ụgbụ m dọta gị. 4 M ga-ahapụ gị n’elu ala. M ga-atụda gị n’ala. Nnụnụ niile ga-ebi n’elu gị. M ga-emekwa ka anụ ọhịa niile dị n’ụwa rie gị rijuo afọ.+ 5 M ga-atụsa gị n’elu ugwu,Meekwa ka anụ gị ju na ndagwurugwu dị iche iche.+ 6 M ga-emekwa ka ala ṅụọ ọbara ga-agbapụta gị n’ahụ́ n’elu ugwu. Ọbara gị ga-ejukwa n’iyi dị iche iche.’* 7 ‘Mgbe a ga-emenyụ gị ka ọkụ, m ga-ekpuchi eluigwe, meekwa ka kpakpando ndị dị na ya gbaa ọchịchịrị. M ga-eji ígwé ojii kpuchie anyanwụ. Ọnwa agaghịkwa na-enye ìhè.+ 8 M ga-eme ka ihe niile na-enye ìhè n’eluigwe gbaa ọchịchịrị n’ihi gị. M ga-emekwa ka ọchịchịrị gbaa n’ala gị.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 9 ‘M ga-eme ka iwe ju ọtụtụ ndị obi mgbe m ga-eme ka e si n’ime gị dọrọ ndị mmadụ n’agha laa ná mba dị iche iche,N’ala dị iche iche ị na-amaghị.+ 10 N’ụbọchị ị ga-ada,M ga-eme ka egwu jide ọtụtụ ndị. Ndị eze ha ga na-ama jijiji, na-atụ egwu n’ihi gị mgbe m ga-efegharị mma agha m n’ihu ha. Ha ga na-ama jijiji mgbe niile, onye ọ bụla n’ime ha ga na-atụ ụjọ ọnwụ.’ 11 N’ihi na Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘Eze Babịlọn ga-eji mma agha ya bịa mesie gị ike.+ 12 M ga-eme ka ndị bụ́ dike n’agha, ndị obi kacha fee azụ ná mba dị iche iche,+Jiri mma agha gbuo ndị agha gị niile. Ha ga-ala ihe Ijipt ji anya isi n’iyi, bibiekwa mmadụ niile nọ n’ime ya.+ 13 M ga-ebibi anụ ụlọ ya niile nọ n’akụkụ nnukwu mmiri dị iche iche.+ Ụkwụ mmadụ ma ọ bụ ụkwụ anụ ụlọ agaghịkwa agbarụ mmiri ndị ahụ ọzọ.’+ 14 ‘N’oge ahụ, m ga-eme ka mmiri ha dị ọcha,M ga-emekwa ka osimiri ha na-asọ ka mmanụ.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 15 ‘Ha ga-amara na m bụ Jehova+Mgbe m ga-eme ka ala Ijipt tọgbọrọ nkịtị, bibie ihe niile dị na ya,+Gbuokwa ndị niile bi na ya. 16 Ihe a bụ abụ iru uju. Ndị mmadụ ga-abụkwa ya. Ụmụ nwaanyị mba dị iche iche ga-abụ ya. Ha ga-abụrụ ya Ijipt na ndị ya niile.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.” 17 N’abalị iri na ise n’ọnwa,* n’afọ nke iri na abụọ, Jehova gwara m okwu, sị: 18 “Nwa nke mmadụ, beere ndị Ijipt ákwá arịrị, kwuokwa na a ga-eme ka ha banye n’ime ala, ha na ndị si ná nnukwu mba dị iche iche, nakwa ndị na-abanye n’olulu.* 19 “‘Ònye ka ị ka maa mma? Banye n’ime ala, ka gị na ndị a na-ebighị úgwù dinara.’ 20 “‘Ha ga-ada ebe ndị e ji mma agha gbuo dara.+ E nyefeela ya* n’aka mma agha. Kpụrụnụ ya na ndị agha ya niile pụọ. 21 “‘Ndị agha kacha bụrụ dike n’agha ga-esi n’ime ime ili* gwa ya na ndị na-enyere ya aka okwu. Ndị Ijipt ga-abanye n’ime ala, dinara ebe ahụ ka ndị e menyere ihere,* ndị e ji mma agha gbuo. 22 N’ebe ahụ ka Asiria na ndị ya niile nọ. Ili ha gbara ya* gburugburu. E ji mma agha gbuo ha niile.+ 23 Ili ndị mmadụ nọ n’obodo ya dị n’ime ime olulu.* Ozu ndị ya niile tọgbọkwa gburugburu ili ya. E ji mma agha gbuo ha niile, n’ihi na mgbe ha dị ndụ, ha mere ka ndị mmadụ na-atụ ụjọ. 24 “‘Ozu ndị obodo Ịlam niile tọgbọ gburugburu ili Ịlam.+ E ji mma agha gbuo ha niile. Ha banyere n’ime ala, bụrụ ndị e menyere ihere.* Mgbe ha dị ndụ, ha mere ka ndị mmadụ na-atụ egwu. Ihere ga-eme ha na ndị na-abanye n’olulu.* 25 Ha busaara ya àkwà* n’ebe ndị e gburu egbu nọ. Ozu ndị ya niile tọgbọkwa gburugburu ili ya. Ha niile bụ ndị a na-ebighị úgwù, ndị e ji mma agha gbuo, maka na mgbe ha dị ndụ, ha na-emenye ndị mmadụ egwu. Ihere ga-eme ha na ndị na-abanye n’olulu.* E busara Ịlam ebe ndị e gburu egbu nọ. 26 “‘N’ebe ahụ ka Mishek na Tubal+ na ndị ha* niile nọ. Ili ndị mmadụ* gbara ya gburugburu. Ha niile bụ ndị a na-ebighị úgwù, ndị e ji mma agha magbuo, maka na mgbe ha dị ndụ, ha na-emenye ndị mmadụ egwu. 27 Ọ̀ bụ na ha na ndị a na-ebighị úgwù bụ́ dike n’agha, ndị ji ngwá agha ha banye n’ili,* agaghị edina otu ebe? A ga-edosa mma agha ha n’okpuru isi ha.* Mmehie ha ga-adịkwa n’ọkpụkpụ ha, n’ihi na n’oge ndị a bụ́ dike n’agha dị ndụ, ha na-emenye ndị mmadụ egwu. 28 Ma, a ga-ebibi gị* ebe ndị a na-ebighị úgwù nọ. Gị na ndị e ji mma agha gbuo ga-atọgbọkwa otu ebe. 29 “‘N’ebe ahụ ka Ịdọm+ na ndị eze ya na ndị isi ya niile nọ. N’agbanyeghị na ha dị ike, e likọtara ozu ha na ndị e ji mma agha gbuo. Ha na ndị a na-ebighị úgwù+ na ndị na-abanye n’olulu* ga-atọgbọkọ. 30 “‘N’ebe ahụ ka ndị isi niile si n’ebe ugwu nọ, ha na ndị Saịdọn niile,+ ndị ha na ndị e gburu egbu nwụkọrọ ọnwụ ihere, n’agbanyeghị na ike ha kpara mere ka ha dị egwu. Ha ga-atọgbọrọ ka ndị a na-ebighị úgwù, ha na ndị e ji mma agha gbuo. Ihere ga-emekwa ha na ndị na-abanye n’olulu.* 31 “‘Fero ga-ahụ ndị a niile. A ga-akasikwa ya obi maka ihe niile mere ndị ya.+ A ga-eji mma agha gbuo Fero na ndị agha ya niile.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 32 “‘Mgbe Fero nọ ndụ, ọ na-emenye ndị mmadụ egwu. Ọ bụ ya mere ya na ndị ya niile ga-eji tọgbọrọ ebe ndị e menyere ihere* na ndị e ji mma agha gbuo tọgbọ.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.”
^ Ọ ga-abụ afọ nke iri na abụọ a dọọrọ Eze Jehoyakim, Ezikiel, na ndị Juu ndị ọzọ n’agha.
^ Na Hibru, “osimiri ha.”
^ Na Hibru, “Ihe si n’ahụ́ gị ga-ejukwa n’iyi dị iche iche.”
^ O nwere ike ịbụ n’ọnwa nke iri na abụọ. Lee anya n’amaokwu nke mbụ.
^ Ma ọ bụ “n’ili.”
^ Ya bụ, Ijipt.
^ Ma ọ bụ “Shiol.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Na Hibru, “ndị a na-ebighị úgwù.”
^ O nwere ike ịbụ eze Asiria.
^ Ma ọ bụ “ili.”
^ Na Hibru, “ka ndị a na-ebighị úgwù.”
^ Ma ọ bụ “ihe ndina.”
^ Na Hibru, “ya.”
^ Na Hibru, “Ili ya.”
^ Ma ọ bụ “na Shiol.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ọ ga-abụ na ihe a na-ekwu ebe a bụ ndị dike n’agha a na-elikọta ha na mma agha ha iji kwanyere ha ùgwù.
^ O nwere ike ịbụ Fero ma ọ bụ Ijipt.
^ Na Hibru, “a na-ebighị úgwù.”